जलस्रोत विधेयक अन्तिम चरणमा - Shikhar Post Shikhar Post
जलस्रोत विधेयक अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । जलविद्युत् विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेको सरकारले यो क्षेत्रलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको जलस्रोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
जलस्रोतको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले “जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०७७” को अन्तिम मस्यौदा तयार गरी छलफल गरिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाबाट आवश्यक सुझाव तथा राय/प्रतिक्रिया पनि मागिएको छ ।
ऐनको मस्यौदामा जलस्रोत उपभोग वा उपयोगको दृष्टिले जलविद्युत्लाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । मस्यौदाको दफा १५ को (१) अनुसार जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकारमा पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी र घरेलु उपयोग तोकिएको छ ।
यसैगरी, दोस्रोमा पशुपालन र मत्स्यपालन, तेस्रोमा सिँचाइ, चौथोमा जलविद्युत्, पाँचौंमा खानी तथा औद्योगिक उपयोग, छैटौंमा जलयातायात, सातौंमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण, आठौंमा आमोद–प्रमोद तथा पर्यटन र नवौंमा तोकिए बमोजिम अन्य उपयोग भनिएको छ ।
जलस्रोत उपयोग गरी कुनै आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत तोकिएको छ । ऐनको मस्यौदामा सुख्खा, खडेरी, जलवायु परिवर्तन वा अन्य प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्धतामा कमी आएमा उपयोगको अग्राधिकारमा परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख छ ।
अग्राधिकार परिवर्तन भए पनि गार्हस्थ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएको जलस्रोतको परिमाणमा हेरफेर वा संशोधन नगरिने उल्लेख छ । सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’मा भने जलविद्युत् विकास छैटौं प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
कानुनीमा रूपमा बाझिने हुँदा नीतिमा जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार नछुट्ट्याइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । अन्तिम चरणमा पुगेको नीति संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर, केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मुख्य सचिवको कार्यालयले फर्काइदिएको छ ।
प्रकाशित मिति : बिहीबार, ११ भाद्र २०७७ ११:५३
सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने: कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम शनिबार सकिएसँगै
लिखु-४ ले थाल्यो उत्पादन, ५२.४ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपियो
काठमाडौं । सोलुखुम्बु, रामेछाप र ओखलढुंगाको सीमा भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माण भएको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ । ग्रिन भेन्चर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट
सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको काम एक सातामा सुचारु गरिने
काठमाडौं । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४, मरुवाका स्थानीयबासीले मुआब्जा नबुझ्दा रोकिएको १३२ केभी सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अबको एक सातामा सुरु गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपाल
सोलु–दूधकोसीको मुख्य सुरुङ ब्रेक ‘थ्रु’, ६ महिनाभित्र विद्युत उत्पादन
काठमाडौं । सोलुखुम्बुमा निर्माण भइरहेको ८६ मेगावाटको सोलु खोला (सोलु–दूधकोसी) जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ वारपार (छिचोलिएको) भएको छ । कूल ७६५४ मिटर लामो सुरुङ हिजो बुधबार (असोज २० गते) अपरान्हतिर
डेढ महीनाभित्र २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क बिजुली : मन्त्री भुसाल
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई डेढ महीनाभित्र निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने बताएकी छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग राजीनामा, कुलमानलाई नियुक्त गर्न निर्देशन
काठमाडौं, १९ साउन । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेसम्मको
सोलु करिडोर प्रसारण लाईन समयमा नबन्दा एक वर्षदेखि विद्युत खेर, अब कहिले बन्ला त ?
काठमाडौं । १३२ केभीको सोलु करिडोर प्रसारण लाईनको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । विगत एक वर्षदेखि सोलुको १७ मेगावाट
सोलु करिडोरमा २४० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य विभिन्न चरणमा
यशोधा सुनुवार/उर्जाखबर काठमाडौं । निर्माणाधीन १३२ केभी सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनमा २४० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले अघि बढाएका ०.६ मेगावाटदेखि ८६ मेगावाटसम्म ९ आयोजना
प्याल्ट्रिक्सेट र सोलार बत्तिबाट छुटकारा पाउँदै काँकुबासी, ७० किलोवाटको लघु जलविद्युत निर्माणको काम धमाधम
सोलुखुम्बु । अहिलेसम्म प्याल्ट्रिक्सेट र सोलार बत्तिको भरमा चलिरहेको सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ काँकुमा लघु जलविद्युत आयोजना बन्दैछ । काँकु क्षेत्रको विद्युत विस्तारका लागि काँकु
माप्य दुधकोसी गाउँपालिकामा बन्ने दुधकोशी-५ जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमती चौधरी ग्रुपलाई !
काठमाडौं। सोलुखुम्बु जिल्लाको माप्य दुधकोसी गाउँपालिकामा बन्न लागेको ११० मेगावाटको दूधकोशी-५ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति चौधरी ग्रुप (सिजी) ले पाएको छ। गत असारमा पहिलोपटक दिएको निवेदन विभागले खारेज गरेपछि सिजीले